Echiche Afrịka na Ntụle ndị ọgbọ: Mkparịta ụka gbara okirikiri - AfricArXiv
bipụtara Johanssen Obanda on 15th September 2021 15th September 2021
AfricaArXiv, Afrịka Afrịka, TCC Africa, na Nyocha nwere obi ụtọ ịnabata mkparịta ụka ogologo oge nkeji iri isii, na-ebute echiche Afrịka na mkparịta ụka ụwa niile n'afọ ndị a ' Izu Nyocha Ndị ỌgbọIsiokwu ya, "Amata na Ntụle ndị ọgbọ". Anyị na ọtụtụ ndị editọ Africa, ndị na-enyocha ya na ndị nyocha ọrụ oge mbụ, anyị ga-enyocha njirimara mgbanwe nke ndị nyocha na kọntinent Africa, site n'echiche kachasị nke na-ahụ ha dị ka ndị na-azụ ihe ọmụma mepụtara na ọnọdụ ndị ọzọ nye ndị nyocha na-arụsi ọrụ ike. na nyocha ndị ọgbọ agụmakwụkwọ. Anyị ga -agba mbọ ịmepụta oghere dị mma maka ịtụgharị uche n'okwu gbasara imeziwanye ihe ọmụma nke ndị ọkà mmụta, enweghị mmasị na nyocha ndị ọgbọ, na imeghe omume nyocha ndị ọgbọ na -agbanwe agbanwe.
Ndị na-eme mgbanwe ga-akpọ ndị na-ekwu okwu ka ha webata onwe ha ma kesaa ahụmịhe ha, akụrụngwa, na nkuzi ha mụtara na njikọ aka ha na usoro nyocha ndị ọgbọ. N'iso mmeghe okwu ndị ọbịa, anyị ga -abanye na nnọkọ Q&A agbagoro ebe a na -akpọ ndị sonyere gburugburu ka ha jụọ ajụjụ, kwuo okwu, ma soro ndị na -ekwu okwu tinye aka.
Kedu mgbe mmemme ahụ?
Wenezdee Septemba 22, 2021
2pm - 3:30 mgbede GMT | 3pm - 4:30 pm WAT | 4pm - 5:30 pm CAT | 5pm - 6:30 pm EAT
Banyere ndị ọkà okwu
Dr. Raoul Kamadjeu -Onye nchoputa ngalaba na onye nchịkọta akụkọ na Akwụkwọ akụkọ ahụike Pan-African-PAMJ
Dr. Raoul Kamadjeu bụ dibịa, ngalaba-nchoputa, na onye nchịkọta akụkọ nke Pan African Medical Journal, ụlọ obibi akwụkwọ na-emepe emepe dabere na Kenya na Cameroon. Dọkịta Kamadjeu nwetara akara mmụta ahụike ya na Cameroon, gụchaa Master's na Ahụike Ọha na Belgium (ULB), wee debanye aha na Ph.D. n'oge na -adịbeghị anya. mmemme na Epidemiology na Mahadum City nke New York.
Dr Stella Onsoro - Onye nyocha na ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ụlọ ọrụ ike na ọkụ ọkụ Kenya - KPLC
Dr. Stellah Osoro Kerongo bụ ọkà n'akparamàgwà mmadụ na onye nyocha nọ na Nairobi, Kenya. Ọ bụ ọkà mmụta akparamaagwa ụlọ ọgwụ a zụrụ azụ nwere ahụmịhe ọkachamara na ndụmọdụ, nkuzi na ndụmọdụ. O nwere nka pụrụ iche n'asụsụ ogbi Ọ Pụrụ iche na nyocha nke mmụọ, nyocha na ọgwụgwọ site na iji ụdị ọgwụgwọ ọtụtụ ihe. Ọ nwere ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe n'inye ọrụ ndụmọdụ.
Nicholas Outa - Nwa akwukwo doctoral na azụ azụ na ịkọ mmiri na Mahadum Maseno
Maazị Nicholas Outa bụ onye na -azọ ọkwa doctoral na ngalaba azụ na azụ mmiri na Mahadum Maseno, Kenya. O nwetara nzere Master's of Science (MSc) na Limnology na Wetland Management site na UNESCO-IHE, Netherlands, Mahadum BOKU, Austria, na Mahadum Egerton, Kenya. Ọ na -ejikwa BSc. Enyere sayensị sayensị mmiri sitere na Mahadum Egerton, Kenya. Maazị Outa ebipụtala ihe karịrị isiokwu iri abụọ na ise n'ime akwụkwọ akụkọ ndị ọgbọ nyochara. Ugbu a, ọ bụ onye na-enye ọzụzụ na ide edemede na nkwukọrịta sayensị na Center Training na Nkwukọrịta (TCC-Africa) yana onye ndụmọdụ maka ndị nyocha ọrụ mbụ na mahadum na kọleji dị iche iche ebe ọ na-ekwu okwu. LinkedIn
Prọfesọ Ruth (BARWA) Oniang'o PhD -Onye isi nchịkọta akụkọ na onye guzobere na African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development (AJFAND)
Dọkịnta Ruth Oniang'o bụ onye prọfesọ, onye nyocha, onye nrite ihe nrite nri nri nke Africa ma gọọmentị nke Kenya kwanyere ya ugwu maka ọrụ ya iji kpochapụ ịda ogbenye na agụụ na Kenya, site na isoro ndị ọrụ ugbo na -arụ obere ọrụ rụọ ọrụ n'ime iri afọ atọ gara aga ma nyere aka wepụta atumatu nchekwa nri na nri. Ọ natara Silver Star nke Kenya na ihe nrite ndị pụrụ iche. Ruth hiwere Rural Outreach Africa (ROA) na mbido 3 wee gaa n'ihu bụrụ olu doro anya na miri emi na nyocha maka mmepe dịka onye ndụmọdụ ụwa na onye na -ekwu okwu. Dị ka onye guzobere na onye nchịkọta akụkọ nke African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development (AJFAND), Rut na-achọ imezi amụma na ime mkpebi site na mgbasa nke nnukwu nchọpụta sayensị na teknụzụ na-apụta n'ọhịa, wee si otú a na-eje ozi dị ka onye na-emetụta ihe. na kọntinent na ụwa niile. Akwụkwọ akụkọ ahụ kara akara afọ iri abụọ na 1990 a kemgbe mmalite ya.
Banyere Izu Nyocha Ọgbọ
Izu Nyocha Ọgbọ bụ ihe omume zuru ụwa ọnụ nke obodo na-eduzi kwa afọ na-eme mmemme dị mkpa nke nyocha ndị ọgbọ na-arụ n'ịdozi ogo sayensị. Ihe omume a na -akpọkọta ndị mmadụ n'otu n'otu, ụlọ ọrụ na otu dị iche iche gbara mbọ ịkekọrịta ozi bụ isi nke ezigbo nyocha ndị ọgbọ, ụdị ọ bụla ma ọ bụ ụdị ọ nwere ike ịdị, dị oke mkpa na nkwukọrịta ndị ọkà mmụta.
Isiokwu Nyocha Ndị Ọgbọ 2021: Ịmata na Nyocha Ndị Ọgbọ
Afọ a Izu Nyocha Ndị Ọgbọ (PRW), ihe omume kwa afọ nke ndị na -ebipụta agụmakwụkwọ, ụlọ ọrụ, ọha mmadụ, na ndị nyocha, ga -abụ nke a ga -ewepụta n'isiokwu bụ "Identity in Review Peer." N'ime izu nke Septemba 20 - 24, ndị otu na -esonye ga -ahazi ihe omume na mmemme iji gosipụta ọrụ nke njirimara onwe onye na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nyocha ndị otu mmụta nwere ike isi kwalite omume nyocha ndị ọgbọ dị iche iche, ịha nhatanha.
Banyere ndị ọbịa
Afrịka Afrịka bụ nzukọ na-eduzi nyocha, na-arụkọ ọrụ ma na-eme mmemme imekọ ihe ọnụ, mmemme ntanetị na ntanetị maka ndị nkuzi n'Africa. Anyị na -azụ ndị nkuzi ka ha malite mmemme nkuzi ha. Anyị kwenyere na mmụta ndị ọgbọ, mmụta mmụta site na omume, ilekọta onye nyocha niile na mmụta ndụ niile. Anyị etolitela ndị na -eme nchọpụta na klọb akwụkwọ nyocha anyị ma soro ndị nkuzi mahadum rụpụta ọzụzụ nyocha na -agbanwe agbanwe. Weebụsaịtị anyị: https://eiderafricaltd.org/
Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ na Nkwurịta Okwu (TCC Africa) bu ulo oru izizi nke mbu n’Africa kuziri ndi oka mmuta ezi nkwurita okwu. TCC Africa bụ ihe akara mmeri Nkwenye, hibere dị ka ihe na-abaghị uru na 2006 ma debanye aha ya na Kenya. TCC Africa na-enye nkwado ikike iji melite mmepụta na ọhụụ site na ọzụzụ na ọkà mmụta na nkwukọrịta sayensị. Chọpụta ihe banyere TCC Africa na https://www.tcc-africa.org/about.
Nyocha bu oru mmeghe nke ndi otu na-achoghi ego Koodu maka Sayensị na Society. Ebumnuche anyị bụ iweta usoro nha nhatanha na nghọta na usoro nyocha nke ndị ọgbọ. Anyị na-echepụta ma mepee akụrụngwa na-emepe emepe iji mepụta nzaghachi na-arụ ọrụ nke ọma, anyị na-agba ọsọ nyocha na ọzụzụ ọzụzụ nke ndị ọgbọ, anyị na ndị otu nwere otu uche iji hazie ihe omume na-enye ohere maka ndị nchọpụta iji mepụta mmekọrịta dị mkpa na njikọ na-egbochi ọdịbendị na ọdịdị ala. Muta ihe banyere PREreview na https://prereview.org.
Categories:	ọkwaNjikọ AkaomumeNyocha ndị ọgbọ
Tags: Afrịka AfrịkaIzu Nyocha Ndị ỌgbọNyochapịaTCC Africa
Eider Africa Preview, AfricaArXiv, na TCC Africa na-emepụta usoro iji tinyekwuo ndị nchọpụta Africa na nyocha ndị ọgbọ - AfricaArXiv	Disemba 7, 2021, elekere 3:35 nke ụtụtụ
oru ngo na-esote usoro nkuzi akụkụ atọ yana mkparịta ụka okirikiri na nso nso a nke TCC Africa, Eider Africa, AfricArXiv, na Prereview haziri ma dabara na […]